Nylon filament Factory - China naịlọn filament Manufacturers, Suppliers
Fotory ọkọnọ PA6 ahịhịa filament
Aha ọgwụ nke PA6 filament bụ polycaprolactam monofilament, nke mejupụtara polycaprolactam. Ọ bụ ihe dịtụ echekwa ngwaahịa naịlọn usoro. Ngwa ngwa ya: nnukwu efere, ahịhịa ite, ahịhịa kalama, ahịhịa ihu, eriri warara, ahịhịa ịsa ahụ, ahịhịa ụlọ ọrụ, wdg.
pa 6 filament bristles eriri
PA6 filament bụ ụdị ụdị akwa nylon siri ike na ụlọ ọrụ ahịhịa. Ọnụahịa PA6 filament brush dịtụ ọnụ ala, ọ nwere mmetụ dị nro. Ọ bụ ihe eji eji filament eji eme ihe. Ngwa ngwa: efere ahịhịa, ite ahịhịa, karama ahịhịa, ihu ncha ihu, wdg
0.5mm transperent PA6 crimpled sịntetik ahịhịa ahịhịa filament
PA6 filament nwere ezigbo ihe eji arụ ọrụ na mmetụta nkwụsị, nkwụsị abrasion, arụmọrụ dị ala dị ala, ezigbo nkwụsi ike kemịkalụ, alkali resistance, soluble ngwa ngwa na phenol, toluene, wdg.